I-SEO & amp; Ukudayiswa kweDialog - Un Aperçu Magistral De Semalt
I-SEO & Ukudayiswa kweDialog - Un Aperçu Magistral De Semalt
Cabanga ukuthi uthola un magasin sans aucune forme de signalisation. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka abantu abafuna ukuhlola noma ukucela imikhiqizo engafanelekile. Kodwa ungabe uthola unemininingwane yakho kanye nemifanekiso yezinto ozithandayo? Cela inciterait amakhono amaklayenti ku-enenregistrer, ukuze uthole imibuzo mayelana nemikhiqizo futhi ngisho ukuthenga ezinye imikhiqizo. Lezi zindlela zithinteka kakhulu ekuhambeni kwakho nemikhiqizo yakho kunezinye izinkampani, okusho ukuthi uhamba nge-trafic plus élevé ainsi que des ventes. Lesi sibonelo sokuqala sifana nesayithi elingenakulungiswa kanti lesi sibonelo sesibili sibhekene nesayithi elihle kakhulu - windows vps game server.
Uchwepheshe oyinhloko ka Semalt , Andrew Dyhan, ichaza ngokuningiliziwe la stratégie pour combiner les processus de SEO et de marketing numérique.
Iyini le référencement?
I-moteur de recherche optimization (SEO) yiyona nqubo yokwenza indawo elula ukukhomba, elula ukukala nokuhlola. In the le plus le fondamental, le optimisation aid les consommateurs à trouver votre entreprise parmi des milliers ou des millions d'autres entreprises et fait partie intégrante de toute stratégie de marketing numérique.
SEO ihlose ukuqondisa les utilisateurs à votre entreprise en travers les formats en ligne. Dlulisa lokhu, iwebhusayithi yakho kumele isetshenziswe ekhasini le-search engine (SERP). Dlulisa amehlo okunye futhi kulula ukuqonda, bheka isithombe esihle:
Njalo ngenyanga, kunezinkulungwane ezingu-14 zama-research en ligne. Njengamanje, cabanga ngalokho okushiwo yi-fraction yezinkulungwane ezingu-14 zama-research okufunayo..Dlulisa imoto ehambisana ne-site yakho, i-enterprise kufanele ifunde kahle kakhulu i-SERP, ikhokhela ngokulandelana kanye nokukhangisa kwezemidlalo.
Thumela u-entreprise ukuthi uphumelele, kufanele usebenzise i-publicité. Futhi uthengisa noma yikuphi ukuxhumana, i-referencement is the equivalent of la publicité gratuite. Ukulungiswa kwe-site yakho kusiza lula ukufakwa kwesigaba ekhasini lokuqala le-SERP.
Ngenxa yokuthi umphakathi okholelwa ukuthi abantu abahlaziye futhi abahlolwayo ama-2 premières amakhasi e-SERP, ukufakwa kwekhasi lakho lokuqala kubeka ithuba lokuthola ulwazi oluvela kubantu abafuna ukuthola ulwazi ngaphambi kokuba ufunde, buyer des produits.
I-Comment function le référencement?
Ama-robots of enginesisetshenziselwa ukuseshwa usebentisa i-text for determer le contenu de la page. Bafeza inani elithile lezinhlelo zokusebenza ezithinta imiphumela yokuhlola, okubandakanya ukuhlola, ukuhlaziya kanye nokuqhathanisa, kanye nokuhlola kokufaneleka kanye nokubuyiswa. I-elements element connus pour contribuer à un score de qualité comprennent:
i-URL kanye namagama wesayithi Iwebhu
Thumela ukuqonda lokho okushiwo yi-cycle cycle, ngakho-ke kubalulekile ukufaka imininingwane mayelana nendlela ongayisebenzisayo ngayo:
Uma uphelelwa yisikhathi, lamakhasi ayagcinwa noma afakwe kwi-database lapho kutholakala khona ulwazi ngalunye uma umsebenzisi engena phakathi kwe-moth de recherche.
3. Ukusebenza kocwaningo:
Uma uhlola unesidingo, i-moteur de recherche ihambelana nesicelo bese uqhathanisa ne-content index. Ukunikeza imininingwane ichaza, i-moteur de recherche kufanele ihambisane nemininingwane yonke amakhasi kanye nezinkampani ezihambisana ne-data data, kanye ne-clé saisi ku-SERP.
Lokhu yisihumusho se-Inthanethi salolu shicilelo. © Phrintela kuphela ukusebenzisa kwangasese. Uqaphele ukuthi izimpendulo ziphendule futhi zibuyele amakhasi kanye negama noma i-entrint in the search. Ngesinye isikhathi, kukhona ama-algorithmes amathathu: ama-algorithmes on site, hors site et sur tout le site.
Uhlobo lwe-algorithme ngayinye luhlola izindawo ezihlukahlukene ze-Web page, okubandakanya izixhumanisi, izinsimbi, ama-keywords kanye nezinhlawulo ze-title. Ngenxa yokuthi ama-engines of search aqhubeka nokulungisa ama-algorithmes, wena ungayifaka ama-modifications ukuze ugcine ama-classements elelevés.
5. Thola kabusha:
Le nqubo yokugcina yenkampani ishicilelwe ekufuneni.
Laba bantu abaningi bakholelwa ukuthi akukho ukungafani phakathi kwe-SEO ne-marketing digital, ukucacisa lokho, kubalulekile ukuhlola kanye nokujulile. Le reférencement ihlose ukuletha izinhlangano zeziphumo. Ngaphandle kwalokho, le-digital marketing iyatholakala ku-intanethi ye-intanethi ye-intanethi esebenza ngokuzikhandla kwama-moteurs de recherche. Thumela usizo une entreprise en ligne ukuze uthuthukise, wena kufanele uqalise indlela yokuthengisa digital futhi wenze uhlelo oluhle lwe-referencement strategy.
SEO-Marketing Integrated Integrated
Ezinye izazi zokukhangisa zihambisana ne-referencement complet njenge-digital digital integrated. Ngaphandle kwalokho, le referencement evolve vers un aspect critique du marketing numérique efficace. Ukuze uqonde lokhu, wena ungathanda kakhulu ukuthola SEO a changé au fil des ans. Lezi zindlela ezazisetshenziswa eminyakeni engu-90 noma 2011 zikhona manje ezidingekayo ezithintekayo. Ngamanje, kunezici eziningi kanye nezici ezisebenzisayo ukufuthekisa i-référencement, okubandakanya i-médias sociaux et les liens reputés contrairement au passé..
Ukuphumelela kokusebenza kwe-strategy
Thumela i-system yakho ye-referencement, kufanele uqalise ukusebenza kwe-SEO. I-Une bonne strategy ihlanganisa:
1. Isibalo se-Marché:
Ukuphumelela kwe-SEO akugcini nje ukuthulukisa i-traffic yakho kuwebhusayithi yakho, kufanele uthuthukise imininingwane yezimfuno zabathengi kanye nezimo ze-geographies ukuze uqinisekise ukuthi uhlangabezana nezimpendulo ezithandayo.
I-Google idinga ukuba amasayithi eWebhusayithi abe yizinkampani zokusebenzisa imishini futhi anikeze ukwaneliseka kubasebenzisi bezingcingo, njengabasebenzisi bezinkampani.
3. Ezinye ongakhetha kuzo:
Thumela i-plus efficacy, iwebhusayithi yakho ayifanele i-bien faire dans un moteur de recherche, mais à travers d'autres moteurs de recherche.
4. Amagama ama-clés ehambisana ne-retour sur investissement:
Gxila ekuqapheliseni kwakho kanye nokusetshenziswa kwamagama amahloni okubalulekayo abantu abasebenzisa imininingwane yokufuna ukuthola ulwazi ukuze baqinisekise ukuthi ukubuyisela imali.
5. Okuqukethwe ne-Web Web clair:
IWebhusayithi Yakho kufanele ihambisane nomsebenzisi, ihlise ukuthutha umkhondo futhi kufanele ufunde okuqukethwe.
Ekugcineni, in the world of the evolution of algorithms, wena kufanele wazi ukuthi le referencement est un processus sans fin. Dlulisa amehlo ku-intanethi ukuze uthuthukise noma uthuthukise wonke ama-change, ucabangele ku-target yakho yomphakathi, imithombo ye-optimization kanye ne-reflechissez à la convivialité de votre site.